Kooxda kubadda cagta Heegan oo ku dhawaaqday macalinkeeda cusub War saxaafadeed kasoo baxay maamulka kooxda kubadda cagta Heegan ayaa lagu xaqiijiyey in Saalax faarax Muxudiin loo magacaabay xilka macalinimo ee kooxda Heegan.
Horseed oo ku guulaysatay koobka sare ee Soomaaliya. Kooxda Horseed ayaa mar kale muddo laba usbuuc gudahood ah
dhegta dhiiga u dartay kooxda Heegan ka dib markii ay galabta rigoorayaal uga
qaaday koobka sare ee dalka oo ah mid ay ku loolamaan kooxaha kala haysta
Horyaalka iyo Jeneral Daauud. Read More...
Xiriirka Soomaaliyeed ee kubada cagta ayaa soo saaray jadwalka horyaalka kubadda cagta dalka 2015-16 . Read More...
Daafacii hore ee kooxdii Horseed oo u hambalyeeyey kooxdiisii hore.
Daafacii adkaa ee kooxdii ciidamada qalabka sida ee Horseed
iyo xulkii qaranka Siciid Xuseen Cayrow ayaa kooxda Horseed ugu hambalyeeye
hanashada kooobka Jeneral Daauud ee sanadkan oo ay maalinimadii khamiisti 2-1 uga qaaday kooxda
Heegan. Read More...
Garsoore Soomaaliyeed oo ka qaybgalaya tababar caalami ah. Warsame
Cumar Cabdulle oo sanadkii 1991 kii magaalada Firenze ee dalka Talyaaniga ka qaatay shahaadada garsoorenimada kubadda
cagta ayaa hadda ku sugan magaalada Zurich ee dalka Switzerland halkaas oo uu
ku soo qaadan doono shahaadada tababaridda garsoorayaasha kubadda cagta. Read More...
Kulankii kama dambaysta ahaa ee koobka Jeneral Daauud 2015 ayna galabta isaga horyimaadeen kooxaha ciidamada Xooga Dalka iyo Booliska isla markaana sida tooska ah looga daawanayey telifishanka qaranka ayaa waxaa 2-1 ay guushii ku raacday kooxda Horseed ee xooga dalka. Read More...
Fiinaalka Koobka Generaal Daa'uud oo Toos looga Daawan Doono SNTV Markii ugu horeysaya taariikhda kubada cagta dalka Soomaaliya ayaa si toos ah Telefishinka looga daawan doonaa cayaar kubadda cagta ah oo ka dhacaysa dalka Soomaaliya. Read More...
Wiilasha Shibis oo u soo Baxay fiinaalka tartanka K/Koleyga Degmooyinka Wiilasha kubbadda Koleyga Degmada Shibis ayaa usoo baxay Fiinaalka tartanka kubbaddaKoleyga Gobolka Banaadir 2015. Read More...
Page 5 of 16First Previous 1 2 3 4  6 7 8 9 10 Next Last Search Articles...